IXiaomi Mi MIX 4 iya kuziswa ngoSeptemba 24 ngokusemthethweni | I-Androidsis
IXiaomi Mi MIX 4 yenye yeemodeli ezilindelweyo kwezi nyanga zokugqibela zonyaka. Uphawu luqinisekisile kwithuba elidlulileyo ukuba le modeli yayiza kufika kwimarike ekwindla. Kwakhona, bekukho amarhe malunga nayo iiveki, njenge Uya kusebenzisa ikhamera ye-MP eyi-108. Kodwa ukuza kuthi ga ngoku akukho nto iqinisekisiweyo malunga nesiphelo esiphezulu sophawu lwesiTshayina.
Ityhiliwe ngoku ungathini umhla wokubonisa weXiaomi Mi MIX 4. Umboniso oza kuthi ungqinelane nomboniso we-MIUI 11, inguqulelo entsha yolungelelwaniso lwentengiso yohlobo lwaseTshayina. Kungayinyanga le xa sidibana nabo.
Ngokwolwazi olutsha olufikayo, iXiaomi Mi MIX 4 yayiza kwenziwa ngokusemthethweni ngoSeptemba 24. Ngalo mhla ufanayo nakweso siganeko sinye, i-MIUI 11, inguqulelo entsha yomaleko wokwenziwa, nayo iya kuziswa ngokusemthethweni. Ngokuqinisekileyo le modeli sele iza kufika nge-MIUI 11.
Ukuba yinyani, kwisithuba esingaphantsi kweeveki ezintathu sobe sele siyazi isiphelo esiphezulu sophawu lwesiTshayina. Ukongeza, kuqikelelwa ukuba kwesi siganeko kunokubakho enye imodeli, Ingayintoni iXiaomi Mi 9 5G, enye imodeli abasifikelela kuyo iindaba ezininzi kwezi veki kwaye kubonakala ngathi izakuba semthethweni kungekudala.
Ngayiphi na imeko, Akukho siqinisekiso saseburhulumenteni sophawu lwaseTshayina. Kodwa amarhe okuba le Xiaomi Mi MIX 4 izakuboniswa ngoSeptemba 24 bafumana amandla. Ke ngumhla ekufuneka siwuqwalasele, kuba kunokwenzeka ukuba lo msitho ubanjelwe kuwo.
Siza kuzimamela iindaba ezintsha malunga nale ntetho. Izithembiso zokuba isiganeko esigcwele iindaba ngumenzi waseTshayina, ngokungathandabuzekiyo ofuna ukwandisa uluhlu lweefowuni kumacandelo ahlukeneyo. IXiaomi Mi MIX 4 iya kuba yimodeli entsha kuluhlu lwayo oluphezulu, kulo nyaka kunabantu abaninzi kunangaphambili ngeefowuni ezintsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi MIX 4 kunye neMIUI 11 ziya kuziswa kwangolo suku lunye
I-Kirin 990 iza ne-5G eyakhiwe ngokwasekhaya